Xirfadaha - DataNumen
Bogga ugu weyn Careers
Ku soo dhowow goob shaqo oo xiiso leh oo hal abuur leh, halkaas oo ay dadka wax ka beddelaan.
At DataNumen, waxaan ognahay in guusheena ay tahay natiijada shaqaalaheena cajiibka ah-koox xirfadlayaal karti leh, xirfadlayaal aad u dhiiranaan leh, oo si wada jir ah uga shaqeynaya gudbinta xalalka soo kabashada xogta ee ka caawiya dadka markay masiibo xogta dhacdo. Waan ku faraxsanahay waxa aan qabanno iyo cidda aan u qabanno, oo hamigaas ayaa ujeeddo leh.
Koox ahaan, waxaan si isdaba joog ah u raadineynaa habab cusub oo cusub oo aan ku dabooli karno baahiyaha macaamiisheena kuna shaqeyno ganacsigeenna.
Hadafkeenu waa mid fudud: samee badeecooyin waaweyn oo dadka ka caawiya inay dib u soo ceshadaan xogtooda inta suurtogalka ah. Jawigayaga wada shaqeynta waxay naga dhigeysaa inaan diirada saarno oo aan si wadajir ah ugu heellanno gaaritaanka yoolkan. DataNumenDhaqanku wuxuu soo dhaweynayaa kala duwanaanshaha fikradaha, qaab nololeedka, fikradaha xirfadeed iyo aragtiyada shaqsiyeed. Waxaan ku faaneynaa waxaan sameyno marwalbana waxaan raadineynaa dad jecel inay naga caawiyaan sii wadida ganacsigeena.
Ma xiiseyneysaa inaad ku soo biirto kooxdeena? Shaqooyinkayaga hoos ka eeg oo codso maanta.
Soo dejiso liis dheeri ah